ब्लास मालो पोयाटोस। Disdain and Fury का लेखकसँग अन्तर्वार्ता | वर्तमान साहित्य
ब्लास मालो पोयाटोस। Disdain and Fury का लेखकसँगको अन्तर्वार्ता
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 14/01/2022 12:00 | साक्षात्कार, लेखकहरू
फोटोग्राफी: ब्लास मालो पोयाटोस वेबसाइट।
ब्लास मालो पोयाटोस उहाँ ला मान्चाबाट हुनुहुन्छ, एक सिभिल इन्जिनियर र एक लेखक, इतिहास, विशेष गरी बाइजान्टिन साम्राज्य र मध्य युगको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ। उनले यसअघि पनि केही उपन्यासहरू प्रकाशित गरिसकेका छन्। क्यास्टिलका प्रभु, भेनिस o शब्दहरूको रक्षक। अन्तिम छ लोपे डे भेगा। घृणा र आक्रोश। म यसको लागि तपाईंको समय र दयाको म साँच्चिकै कदर गर्छु साक्षात्कार जसमा उहाँले हामीलाई यो र अन्य धेरै विषयहरू बारे बताउनुहुन्छ।
Blas Malo Poyatos - अन्तर्वार्ता
साहित्य वर्तमान: तपाईको पछिल्लो पुस्तकको शीर्षक हो लोपे डे भेगा। तिरस्कार र क्रोध। तपाई हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र यो विचार कहाँबाट आयो?
BLAS BAD POYATOS: मैले लोपे डे भेगाको जीवन उपन्यास गरें, उनको परिपक्वता र म्याड्रिडमा द्वन्द्वको समयमा लेख्ने पुरातन कलाको रक्षा गर्ने लेखकहरूसँग, विशेष गरी मिगुएल डे सर्भान्टेसको विरुद्धमा।। तिनीहरूको शत्रुता सबै तहहरूमा फैलियो, शहर र अदालतलाई लोपका अनुयायीहरू र सर्भान्टेसका अनुयायीहरू बीच विभाजन गर्दै। अन्य संलग्नहरू क्वेवेडो र गोंगोरा थिए। यो विचार 2005 मा उत्पन्न भयो 400 औं वार्षिकोत्सव को प्रकाशन को डन Quixote दाग कोCervantes को। सबैले Cervantes को कुरा गरे। म लोपको स्मृतिको रक्षा गर्न चाहन्थें।
BMP: मैले स्पष्ट रूपमा सम्झने सबैभन्दा पुरानो हो खजाना को द्वीप, स्टीभेन्सन द्वारा, शानदार छविहरु संग विलुप्त सम्पादकीय सगरमाथा को एक संस्करण, र पक्कै पनि, मेरो पहिलो कथा उहाँबाट प्रेरित थियो। ऊसँग एउटा कंकाल थियो, हराएको खजाना, एउटा केटा थियो जसले फेला पार्यो। मैले यो 10 वर्षको हुँदा लेखेको थिएँ।
BMP: म जीवित लेखकहरू र मृत लेखकहरू बीचको भिन्नता छु। धेरैलाई सिफारिस गर्न सकिन्छ, केही छान्नु भनेको अरूलाई त्याग्नु हो। म मा धेरै प्रभावशाली JRR हुनुहुन्छ टोलकिएन र इसाक असिमोभ। अधिक आधुनिक, स्टीवन सेलर, जोसे सोटो केटी y सेबास्टियन रोआ। क्लासिकहरू मध्ये, जुन तपाईंले रमाइलो गर्न र सिक्नु पर्छ, अहिले म गुस्ताभलाई सिफारिस गर्दछु फ्लाबर्ट.
BMP: सिनुहा, को सृष्टि मिका वाल्टारी जसबाट यो एउटा इजिप्टियन चरित्र थियो जस्तो देखिन्छ। वाई क्लाउडियस सम्राट, रोबर्ट द्वारा शानदार रूपमा शिल्प लास.
BMP: को लागी ली आवश्यक छ मौन। लागि लेख्नुहोस्मलाई यो बाट हुन आवश्यक छ रात। तिनीहरू जीवाश्म बनेका चलनहरू हुन्। मलाई दिनको समयमा कोलाहलमा पढ्न वा लेख्न गाह्रो हुन्छ। यद्यपि, आफैलाई कागजात गर्न अध्ययन गर्न मौनता वा ती तालिकाहरू आवश्यक पर्दैन।
BMP: म साइटको बारेमा वास्ता गर्दिन जबसम्म यो छ सहज र माथिको पूरा हुन्छ। घरमा, सबैजना गएको वा सुत्दा म राम्रो लेख्छु। म सृजना गर्दा बाधा परेको सहन सक्दिन। मेरा दुई साना छोराछोरी छन्, सही समय पाउन गाह्रो छ।
BMP: मसँग अझै स्वाद छ विज्ञान कथा। र म धेरै पढ्न चाहन्छु, साहसिक जासूस उपन्यासहरूक्लाइभ Cussler जस्तै। तिनीहरू धेरै रमाइलो छन्। र थप पढ्नुहोस् क्लासिक्स। तर मसँग धेरै विचाराधीन कुराहरूको लागि समय छैन।
BMP: अब म छु leyendo गुस्ताभका उपन्यासहरू फ्लाबर्ट, जब म उहाँ र उहाँको लेखनको बारेमा व्याख्यानहरू सुन्छु, किनभने म उहाँलाई एक लेखकको रूपमा एक आकर्षक मान्छे पाउँछु। र मार्को टुलियोका विभिन्न पुस्तकहरू सिसेरो, जो आश्चर्यजनक छन्। टाइप गर्दै, म अहिले मा छु मध्य युगहरू.
BMP: सधैं जस्तै, यो पाण्डुलिपि संग संतृप्त छ। तर राम्रो पाण्डुलिपिले ढिलो होस् वा ढिलो प्रकाशक फेला पार्छ। पुस्तक पसलहरूमा अरूको बीचमा आफ्नो पुस्तक हेर्न चाहने अहंकार सबैसँग हुन्छ, यो यस्तो छ। एउटा पुस्तक उद्यमीले मलाई प्रकाशित गर्ने जोखिम उठाउनु मेरो लागि प्रशंसाको विषय हो । त्यसैले यो हुनुपर्छ।
के संकटको क्षण जुन हामीले अनुभव गरिरहेका छौं तपाईंको लागि गाह्रो भइरहेको छ वा भविष्यका कथाहरूको लागि केहि सकारात्मक राख्न सक्षम हुनुहुनेछ?
BMP: म हुँ भाग्यमानी। मेरो परिवारमा कोही पनि कोभिडबाट मरेका छैनन्। मेरो जीवन खराबको लागि परिवर्तन भएको छैन, तर राम्रोको लागि, किनकि हालै म फेरि बुबा भएँ र अहिले घरमा हामी चार जना छौं। जिउनु पर्छकोभिड छ वा छैन। जसले यस्तो सोच्दैन उसले चिहानमा गएर गाड्नु पर्छ र शान्तिमा बस्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » ब्लास मालो पोयाटोस। Disdain and Fury का लेखकसँगको अन्तर्वार्ता
मरिना नाति भन्यो
बनाउँछ3दिन
म ब्लगहरू बारे जान्दै छु, र मैले तपाईंको फेला पारे।
मलाई यो रमाइलो र धेरै रोचक लाग्यो।
Marina Nieto लाई जवाफ दिँदै
रुडयार्ड किपलिंग। उनको मृत्युको वार्षिकोत्सव। चयन गरिएका वाक्यांशहरू
Eduardo Mendoza को जन्मदिन। टुक्रा र वाक्यांश को चयन